Dad: Eeg dhamaantiis burburay: xiddigahan ma aysan ogeyn sida loo doorto tikidhkooda. Iska ilaali qaladaadkooda talooyinkan - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Dad: Eeg dhamaantiis burburay: xiddigahan ma aysan ogeyn sida loo doorto tikidhkooda. Iska ilaali khaladaadkooda talooyinkan
Tights waa dhibaato dhab ah oo dumarka badan. Ma ahan mid aad u fudud in la jeexo, laakiin sidoo kale waa adag tahay in la doorto!
Akhri ALSO: Talooyinkan 7 Xaaladahaaga ayaa kaa dhigi doona inaad eegto da'da yar
Tusaale ahaan, labadaa waa in aad ku xiran tahay dharka dhirta dhogorta ah marka dharka nuuradu aad u khafiif yihiin oo aad u baahan tahay wax kulul? our conseil iyo jawaabta su'aashan: waxay ku xiran tahay midabka ah ee kabaha aad. Haddii ay yihiin madow, markaas tights gudcur qaro weyn xal u noqon doonaan kaamil ah. Haddii kabaha waa midabkeedu khafiif, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in ay meel iska dhigaan dharka - haddii aad xirto tights cad / beige, aad eegto laga yaabaa in sida Gabaryar in dhar snowflake ah.
Intaa waxaa dheer, ma aha wax qurux badan ama xarrago ah in ay xirtaan dhar nuurad ah oo ka dhan ah 40 danaers in lurex. aad lugaha wuxuu bilaabi doonaa in uu u ekaado sida sausages ku duuban caag. Waa isbarbardhig aad u naxdin leh, laakiin waa run, gaar ahaan marka ay timaado sawirada!
Post by Planet Nylon (@planetnylon) on Oct 3, 2018 at 5: 21am PDT
Tikidhada waaweyn ee bangiyada, waxay u fiicnaan laheyd inay ku qariyaan qolka. Isbeddelkani wuxuu ku faafay adduunka moodada wuxuuna lumay sida ugu dhakhsaha badan.
Waxaa jira malaayiin shidaal si ay u sameeyaan xulasho sax ah oo tayo leh! Maaha wax la yaab leh in xitaa caanka jilayaasha caanka ah ay mararka qaar sameyn karaan qaladaad.
Waxaan soo helnay tusaalooyin qaar ka mid ah meelaha caanka ah ee caanka ah ay si buuxda u burburiyeen faahfaahin hal mar ah. Waa maxay xishood!
Dhismuhu wuxuu u ahaa inuu u dhinto, laakiin tayada jilicsan ee jidhka ayaa u fiicnaan laheyd si ay u eegaan.
Akhri ALSO: Meghan Markle wuxuu kabaha udhigaa mid aad u weyn, waa khabiiro caan ah oo loo yaqaan 'tafsiirka': sharaxaad!
Halkan, waxaa jira wax aad u badan: dhar gaaban oo qaawan, qoto dheer oo qoto dheer, jeexjeexo. Iyo tayada kalluunka ee run ahaantii ma joogaan meeshooda.
Qalad isku mid ah sida Meghan. Muuqaaladu aad ayey u muuqdaan!
Dusha sarre waa xagaaga, laakiin hoos ayaa ah dayrta. Marka ay timaado dharka ay muujinayso qaybo badan oo jidhka nabaro ah (décolleté, bras), waxa fiican in la doorto nabraha naylka jilicsan.
Meelahaas oo kale waa mid aad u qarxi kara.
Meelaha aad doorbidayso? Miyaad u doorataa si habboon ama miyaad u qaadataa waxa ku jira gaaritaankaaga? Noo sheeg hoos ku xusan!
Akhri ALSO: Risky Gardarrada: 5 Waxyaabaha Dumarka ah ee Waxyeelleyn kara Caafimaadkaaga
PHOTOS. Sarah Michelle Gellar iyo Freddie Prinze Jr: waxay ku soo laabanayaan sheeko jacayl ah oo socota